ယနေ့ည ယူဗင်တပ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲကို ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် လာရောက် ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ အပေါ် သူ့ရဲ့ ခံစားချက်ကို အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ တူချယ် - SPORTS MYANMAR
ယနေ့ည ယူဗင်တပ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲကို ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် လာရောက် ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ အပေါ် သူ့ရဲ့ ခံစားချက်ကို အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ တူချယ်
ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ ယနေ့ည မှာ ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်း အဆင့်သို့ တက်ရောက်ရေး အတွက် အဆုံးအဖြတ် အုပ်စု ပွဲတပွဲ အဖြစ် အုပ်စုဗိုလ်လုဖက် ယူဗင်တပ် အသင်းကို အိမ်ကွင်း စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ချ် မှာ လက်ခံ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီပွဲမှာ အနည်းဆုံး သရေ ကစားနိုင်ရင် ၊ ချဲလ်ဆီးတို့ နောက်တဆင့်ကို တက်မှာ ဖြစ်ပြီး ၊ နိုင်ခဲ့ရင်တော့ အုပ်စုဗိုလ် နေရာကို လွှဲပြောင်း ရယူခွင့် ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ထိုပွဲကို အသင်းပိုင်ရှင် ဖြစ်သူ ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက် အားပေးမယ် ဆိုပြီး သတင်း ကြီးကြီးမားမား ထွက်ပေါ်နေပါတယ် ။
အေဘရာမိုဗစ်ချ် ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ရက်လောက်ကမှ ၎င်းကိုယ်တိုင် အားတက်သရော ပါဝင်ထားတဲ့ Say No to Antisemitism ဆိုတဲ့ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ရန်ပုံငွေ ပွဲတပွဲ အတွက် လန်ဒန်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိနေတယ်လို့ သိရပြီး ၊ ကြုံတုန်းကြိုက်တုန်း ၎င်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ပွဲကောင်း တပွဲကို လာရောက် ကြည့်ရှုဖို့ စီစဉ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မနေ့က ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် က ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် သာ ယနေ့ည ပွဲကို စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ချ်ကွင်းထဲ အထိ လာရောက် အားပေးမယ် ဆိုရင် ၎င်းတို့ဖက်က အလွန်အမင်း ဝမ်းသာ အားရမိမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ သူ မလာခဲ့ရင်လည်း ၎င်းတို့ရဲ့ ပွဲအပေါ် ချဉ်းကပ်မှု က အပြောင်းအလဲ ရှိမှာ မဟုတ်ကြောင်း အခုလိုပဲ ဖွင့်ဟလာပါတယ် ။
တူချယ် က ” ရိုမန် အတွက် ရှိုးတပွဲ ဖြစ်အောင် လုပ်ပြဖို့? ဒါက အရေးမကြီးပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှိုးပွဲ က ကိုယ့်ရဲ့ အခြေခံစနစ်ပါပဲ ။ ကွင်းထဲမှာ အသင်းပိုင်ရှင် ရှိသည်ဖြစ်စေ ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပေးဆပ် ကစားရမှာပါ ။ ”
” အကယ်၍ သူ ကွင်းထဲမှာ ရှိမနေရင်လည်း ၊ ကျွန်တော်တို့ကို အနီး တနေရာကနေ အမြဲတမ်း စောင့်ကြည့်နေတယ် ဆိုတာ အားလုံး သိထားကြပါတယ် ။ ပြင်းထန်တဲ့ ကြိုးစားမှု ဟာ သူ အပါအဝင် ကွင်းထဲက ပရိသတ် အားလုံး ကို ပျော်ရွှင်စေမှာ ဖြစ်သလို ၊ ဖျော်ဖြေမှုလည်း အပြည့်အဝ ပေးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ”
” ဒါဟာ ပွဲကြီး တပွဲ ၊ ပွဲကြပ် တပွဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ မနက်ဖြန်ပွဲကို ကွင်းပြည့်ကွင်းလျှံ ဖြစ်စေချင်ပါတယ် ။ အသင်းသားတွေကိုလည်း ထိပ်တန်း ခြေစွမ်း အဆင့်အတန်းမှာ ရှိနေစေချင်ပါတယ် ။ အကယ်၍ ရိုမန်သာ ကွင်းထဲအထိ လာရောက် အားပေးမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အလွန်အမင်း ပျော်ရွှင်ကြမှာပါ ။ ”
” ဒါပေမယ့် သူ မရောက်လာခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ဟာ ပွဲအပေါ် ချဉ်းကပ်ပုံ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ ဆက်လက်ပြီး တူချယ် က ယနေ့ည ပွဲမတိုင်မီ ( သို့မဟုတ် ) ပွဲအပြီးမှာ အေဘရာမိုဗစ်ချ်နဲ့ တွေ့ဆုံ စကားပြောဖို့ အစီအစဉ် ရှိမရှိ ဆိုတဲ့ အမေးကိုလည်း အခုလိုပဲ တုန့်ပြန် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် ။
တူချယ် က ” ပထမဆုံး အနေနဲ့ ရိုမန် ဟာ လောလောဆယ် လန်ဒန်မှာ ရှိနေသလား ၊ မနက်ဖြန် ပွဲကို လာကြည့်မလား ဆိုတာ ကျွန်တော် တကယ် မသိဘူးလို့ ပြောပါရစေ ။ သူနဲ့ တွေ့ဆုံသွားဖို့ ရှိသလား ဆိုတဲ့ အမေးကို ဖြေရရင်တော့ No ပါ ။ သူဟာ စပါယ်ရှယ် အသင်းပိုင်ရှင် တဦးလား ? အရေးကြီးဆုံး က သူဟာ တကယ့် အမာခံ ဘောလုံး ပရိသတ် တဦး ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ ။ ”
” သူဟာ ဘောလုံး အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အတွင်းကျကျ သိချင်သလို ၊ ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ရတာကိုလည်း နှစ်သက်ပါတယ် ။ ကော့ဘ်ဟမ်း လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာ သူ သိချင်သလို ၊ ကျွန်တော်တို့ကလည်း အမြဲတမ်း နောက်ဆုံးရ အခြေအနေတွေကို သူ့ဆီ သတင်းပေးဖြစ်ပါတယ် ။ ”
” ကျွန်တော့မှာ သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖီလင် တခု ရှိပါတယ် ။ အဲဒါက သူဟာ ဖျော်ဖြေခံရဖို့ကို လိုလားတယ် ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တာကို လိုလားတယ် ၊ ကွင်းတွင်းမှာ မှန်ကန်တဲ့ ခံယူချက် ရှိနေဖို့ကို လိုလားတယ် ဆိုတာပါပဲ ။ ဒါဟာ သူ ဒီ အသင်းမှာ ဖန်တီးထားတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ”
” သူ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီအသင်းမှာ ပါဝင်ခွင့် ရတာ ၊ အလုပ်လုပ်ခွင့် ရတာကိုပဲ ကောင်းချီးပေးခံရသလို ခံစားရစေပါတယ် ။ သူ့ကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရှေ့ဆက် တိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ်တွေ အတွက် စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။